नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरु विस्तार गरेका छन्। उनले केन्द्रीय विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरु मनोनयन गरेका हुन्। कांग्रेसको केन्द्रीय विभागमा गण्डकी प्रदेशबाट को को परे ? गण्डकीबाट संगठन विभाग सदस्यमा नवलपुरका विष्णुबहादुर कार्की, पर्वतका गंगाधर तिवारी, गोरखाका भूगोल थापा, तनहुँका इन्दु शर्मा ढकाल, लमजुङका यमबहादुर गुरुङ छन् । शिक्षा विभागका सचिवमा कास्कीका डा कृष्णप्रसाद पौडेल मनोनित भएका छन् । विभागमा गण्डकी प्रदेशको गोरखाबाट डा हिमलाल घिमिरे,… पुरा पढौ
उपभोक्ता समितिबाट भएको सडक निर्माण सम्बन्धी योजनामा भुक्तानी दिएबापत बिभिन्न बहाना बनाई १ लाख घूस लिइसकेपछि उनी पक्राउ परेका थिए । अख्तियार पोखराबाट खटिएको टोलीले उनलाई पोखराकै जिरो किमीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । अधिकारीले सेवाग्राहीसँग गुजा सिलगुम ओखरधारा खोलेसिबाङ सडक निर्माण योजनाको अन्तिम मुल्याङ्कन बनाउने प्रयोजनको लागि एक लाख लिएको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० को कसुर गरेकाले उनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा… पुरा पढौ
शनिबार मध्यराति निधन भएका पोखरा १९ का कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनको टुंगो अझै लागेको छैन । पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियुमा मृत्यु भएका ६२ वर्षीय यी पुरुष मधुमेहका समेत बिरामी थिए । प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुने यी तेस्रो कोरोना संक्रमित हुन् । यसअघि प्रतिष्ठानमा निधन भएका पहिलो कोरोना संक्रमितको पोखरा ११ को सेती नदी किनारमा शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वडाध्यक्ष घाइते भएका थिए भने केही पक्राउ परेका थिए । दोस्रो मृतकको… पुरा पढौ
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, ढल्केबर ग्रीड शाखा, धनुषाका कार्यालय प्रमुख उपप्रबन्धक रितेश गुप्ता पक्राउ परेका छन् । गुप्ताले भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु स्वीकृत नहुँदै कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित बिभिन्न योजनाको भुक्तानी दिन भनी पहिले नै चेक काटेका थिए । उनी ती चेक लिएर काठमाण्डौंतर्फ जाँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिई गएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । गुप्तालाई शंकास्पद रुपमा १ करोड २४ लाख ९१ हजार १ सय ४५… पुरा पढौ
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ का वडा सदस्य रामबहादुर गुरुङ (कमल)ले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । घर्राबारी माटापानी सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेश्वर भण्डारीलाई गुरुङले घर, परिवारसहित उडाइदिने धम्की दिएका हुन् । शुक्रबार गुरुङले इन्जिनियरलाई घूस दिनुपर्छ भनी महेश्वरसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । रेकर्ड गरेर बुझाएको भन्दै उनले महेश्वरलाई फसाउने धम्की दिएका छन् । उनले फोनमा भनेका छन्, ‘तिमीले मलाई चिनेका छौ होला… पुरा पढौ
रोल्पामा पहिलो जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका तिलाको मूल प्रवेशद्वारमा जनयुद्ध स्मृति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको हो । जनयुद्ध शुरु भएको रोल्पामा भावी पुस्तालाई इतिहासको रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ जनयुद्ध स्मृति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको बताइएको हो । मूल प्रवेशद्वारमा जनमुक्ति सेनाको तस्वीर कोरिएको छ । उक्त तस्वीरमा महिला जनमुक्ति सेनाले पिठ्युमा बच्चा, हातमा बन्दुकसहित पुरुष सेना सँगसँगै पहाडमा उकालो लाग्दै गरेको युद्धताकाको दुर्लभ तस्बिरलाई झल्काइएको छ… पुरा पढौ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कम्युनिस्ट बनाउन नसकिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले केपी शर्मा ओली सच्चिन तयार नभएको बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै नेता नेपालले भने, ‘‘कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवादको सिद्धान्तमा चल्छ। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा चल्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा मनपरी चल्दैन। हामीले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादको सिद्धान्तका आधारमा चल्न र सच्चाउन कोशिस… पुरा पढौ
राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय राना घुससहित पक्राउ परेका छन्। अधिकृत राना र व्यवसायी अनिल कुमार झालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत रानाले गुड्खा/चिनी व्यवसायी अनिल कुमार झाबाट मासिक रूपमा घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलबाट खटिगएको टोलीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अधिकृत राना र व्यवसायी… पुरा पढौ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकाश पोख्रेललाई भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले लेखा अधिकृत पोखरेललाई उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट कक्षा ८ को परीक्षा संचालनमा भएको खर्चको फरफारक गरी भुक्तानी गरेबापत ६५ हजार घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले लेखा अधिकृत पोखरेल माथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० को कसुर अपराध भएको भन्दै ६५ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार… पुरा पढौ